राशिअनुसार यस्तो हुन्छ प्रेम सम्बन्ध, जान्नुहोस् कस्तो राशिवालासँग प्रेम गर्दा सफल भइन्छ - www.kchhakhabar.com
बुधबार, माघ १५, २०७६
कला / मनोरन्जन खबर
राशिअनुसार यस्तो हुन्छ प्रेम सम्बन्ध, जान्नुहोस् कस्तो राशिवालासँग प्रेम गर्दा सफल भइन्छ
प्रकाशित मिति: बिहिबार, साउन २६, २०७४ समय: १३:२४:१८
राशिअनुसार मानिसको स्वभाव पनि फरक हुने विश्वास गरिन्छ । ज्योतिषशास्त्रको मान्यताअनुसार राशिकै आधारमा व्यक्तिको स्वभावको मूल्याङ्कन र भविश्य निर्धारण हुन्छ ।
राशिको स्वभावका आधारमा सम्बन्ध, दोस्ती, प्रेम प्रसङ्ग पनि निर्भर हुन्छ । कतिपयलाई त कोतुहुल्ता होला कुन राशिसंग बिबाह गर्दा राम्रो होला भन्ने कुरा । तपाईको राशिले निर्धारण गर्छ कस्तो साथी पाउनुहुन्छ ।
जुन मान्छेको राशि मेष हो उसको लागि मेष, सिंह या धनु राशि हुनेहरुसँगको सम्बन्ध बलियो हुन्छ । यिनीहरूबीचको प्रेम सम्बन्ध उत्तम रहन्छ । मेष राशि हुने व्यक्तिका लागि कुम्भ, तुला या मिथुन राशि हुने साथी सामान्य रहन्छन् । यीनको प्रेम सम्बन्ध आपसी तालमेलमा अधिक निर्भर रहन्छ । वृष, कन्या या मकर राशि हुने मानिसकासँग मेष राशिको प्रेम सम्बन्ध सफल हुने सम्भावना ५०–५० रहन्छ । मेष राशि हुने मानिसको लागि वृश्चिक, मीन या कर्कट राशिका साथी उत्तम मानिँदैन । यीनीहरुका बीचको प्रेम सम्बन्ध सफल हुने सम्भावना एकदम कम हुन्छ ।
वृष राशि हुने व्यक्तिका लागि वृष, कन्या या मकर राशिका साथी श्रेष्ठ हुन्छ । यीनको प्रेम सम्बन्ध उत्तम रहन्छ । यदि कुनै व्यक्तिको राशि वृष हो र उ कर्कट, वृश्चिक या मीन राशिका साथी रोज्न चाहन्छ भने यो जोडी सामान्य रहन्छ । जो मानिसको राशि वृष हो उनको लागि मेष, सिंह, या धनु राशिका व्यक्तिसँग प्रेम सम्बन्ध सफल हुने सम्भावना ५०–५० रहन्छ । वृष राशिका लागि मिथुन, तुला या कुम्भ राशि हुनेहरूका साथ जोडी राम्रो मानिदैन ।
मिथुन राशिका मानिसका लागि मिथुन, तुला या कुम्भ राशिका साथी सबैभन्दा राम्रो हुनेछन् । यिनको प्रेम सम्बन्ध पनि उत्तम नै रहन्छ । यदी कुनै व्यक्तिको राशि मिथुन हो र उ मेष, धनु या सिंह राशिका साथी छान्न चाहन्छ भने त्यो जोडी सामान्य रहनेछ । जुन मानिसको राशि मिथुन छ उनको लागि कर्कट, वृश्चिक या मीन राशिको व्यक्तिसँग प्रेम सम्बन्ध सफल हुने संभावना ५०–५० हुन्छ । मिथुन राशि भएका व्यक्तिका लागि लागि वृष, कन्या या मकर राशि भएका व्यक्तिसँगको सम्बन्ध राम्रो हुँदैन ।
धनु राशि हुने व्यक्तिका लागि मेष, सिंह या धनु राशि भएका व्यक्तिसँगको सम्बन्ध उत्तम मानिन्छ । यीनको प्रेम सम्बन्ध उत्तम रहन्छ । यदी कुनै व्यक्तिको राशि धनु हो र उ मिथुन, तुला या कुम्भ राशिका साथी बनाउन चाहन्छ भने यो जोडी सामान्य रहन्छ । जुन मानिसको राशि धनु हो उसको लागि वृष, कन्या या मकर राशिको व्यक्तिको साथ प्रेम सम्बन्ध सफल हुने ५०–५० सम्भावना रहनेछ । धनु राशिका लागि कर्कट, वृश्चिक या मीन राशि हुनेहरुका सँगको जोडी त्यति राम्रो मानिदैन ।
जुन मानिसको राशि कर्कट हो उनको लागि कर्कट, वृश्चिक या मीन राशिको साथी उत्तम हुन्छन् । यिनीहरुको प्रेम सम्बन्ध उत्तम मानिन्छ । कर्कट राशिका मानिसका लागि वृष, कन्या या मकर राशिका साथी सामान्य हुन्छन् । यिनको प्रेम सम्बन्ध आपसी तालमेलमा अधिक निर्भर रहन्छ । मिथुन, तुला या कुम्भ राशिका मानिससँग कर्कट राशिको प्रेम सम्बन्ध सफल हुने सम्भावना ५०–५० रहन्छ । कर्कट राशिका मानिसका लागि मेष, सिंह या धनु राशि हुनेहरु त्यति राम्रो मानिदैन । यिनीहरुको प्रेम प्रसंगको सफलताको सम्भावना पनि एकदमै कम हुन्छ ।
सिंह राशिका मानिसका लागि मेष, सिंह या धनु राशिका साथी उत्तम हुन्छ । यिनका बीचको प्रेम सम्बन्ध सफल हुन्छ । यदि कुनै व्यक्तिको राशि सिंह हो र उ मिथुन,तुला या कुम्भ राशिका साथीसँग मित्रता राख्न चाहन्छ भने यो जोडी सामान्य रहने छ । जनु मानिसको राशि सिंह हो, उसको लागि वृष, कन्या या मकर राशि के व्यक्तिका साथ प्रेम सम्बन्ध हुने सम्भावना ५०–५० हुन्छ । सिंह राशिका लागि कर्कट, वृश्चिक या मीन राशिसंगको जोडी त्यती राम्रो हुँदैन ।
जुन मानिसको राशि कन्या हो त्यो मानिसका लागि वृष, कन्या या मकर राशिका साथी उत्तम मानिन्छ । यिनीहरुको प्रेम सम्बन्ध उत्तम हुन्छ । कन्या राशिका मानिसका लागि कर्कट, वृश्चिक या मीन राशिका साथी सामान्य मानिन्छन् । यिनको प्रेम सम्बन्ध आपसी तालमेलमा अधिक निर्भर रहन्छ । मेष, सिंह र धनु राशिका मानिसका साथ कन्या राशिका प्रेम सम्बन्ध सफल हुने संभावना ५०–५० रहन्छ । कर्कट राशिका मानिसका लागि मिथुन, तुला या कुम्भ राशिकासँगको मित्रता त्यति राम्रो मानिदैन । यिनीहरुको बीचको प्रेम सम्बन्ध पनि निकै कम हुन्छ ।
तुला राशिका मानिसका लागि मिथुन तुला या कुम्भ राशिका साथी सबैभन्दा उत्तम मानिन्छन् । यिनीहरूको प्रेम सम्बन्ध उत्तम हुन्छ । यदी कुनै व्यक्तिका राशि तुला हो र उ मेष, सिंह या धनु राशिका साथी छनौट गर्न चाहन्छ भने यो जोडी सामान्य रहन्छ । जुन मानिसको राशि तुला हो उनको लागि कर्कट, वृश्चिक या मीन राशिका व्यक्तिसँग प्रेमसम्बन्ध सफल हुने संभावना ५०–५० हुन्छ । तुला राशिका लागि वृष, कन्या या मकर राशिका साथ जोडी बन्नु बनाउनु त्यति राम्रो हुँदैन ।
जुन मानिसको राशि वृश्चिक हो ति मानिसका लागि कर्कट, वृश्चिक या मीन राशिका साथी उत्तम मानिन्छन् । यिनको प्रेम सम्बन्ध सफल रहन्छ । वृश्चिक राशिका मानिसका लागि वृष, कन्या या मकर राशिका साथी सामान्य रहन्छ । यिनको प्रेमसम्बन्ध आपसी तालमेलमा अधिक निर्भर रहन्छ । मिथुन, तुला या कुम्भ राशिका मानिसका साथ कन्या राशिका प्रेमसम्बन्ध सफल हुने संभावना ५०–५० रहन्छ । वृश्चिक राशिका मानिसका लागि मेष, सिंह या धनु राशिसँगको मित्रता राम्रो हुँदैन । यिनीहरूको प्रेम सम्बन्धको सफलता पनि कमै संभावना हुन्छ ।
जुन मानिसको राशि मकर हो ती मानिसका लाथि वृष, कन्या या मकर राशिका साथी सबैभन्दा राम्रो मानिन्छ । यिनीहरुको प्रेम सम्बन्ध उत्तम हुन्छ । मकर राशिका मानिसका लागि कर्कट, वृश्चिक या मीन राशिका साथी सामान्य रहन्छन् । यिनीहरुको प्रेम सम्बन्ध आपसी तालमेलमा निर्भर रहन्छ । मेष, सिंह या धनु राशि का मानिसका साथ सम्बन्ध सफल हुने सम्भावना ५०–५० रहन्छ । मकर राशिका मानिसक लागि मिथुन, तुला या कुम्भ राशि सँगकोे सम्बन्ध राम्रो मानिदैन । प्रेम सम्बन्धको सफलता पनि एकदमै कम हुन्छ ।
कुम्भ राशि भएका मानिसका लागि मिथुन, तुला या कुम्भ राशिका साथी उत्तम मानिन्छ । यिनीहरूका बीचको प्रेम सम्बन्ध राम्रो हुन्छ । यदी कुनै व्यक्तिको राशि कुम्भ हो भने मेष, सिंह या धनु राशिका साथी छनौट गरे यी साथीको जोडी सामान्य रहने छ । जुन मानिसको राशि कुम्भ हो उनको लागि कर्कट वृश्चिक या मीन राशिका व्यक्तिका साथ प्रेमसम्बन्ध सफल हुने सम्भावना ५०–५० प्रतिशत हुन्छ । कुम्भ राशिका लागि वृष, कन्या या मकर राशि हुनेहहरुको सम्बन्ध राम्रो मानिएको छैन ।
जुन मानिसको राशि मीन हो उसको लागि कर्कट, वृश्चिक या मीन राशिका साथी उत्तम हुन्छन् । यिनीहरुको प्रेम सम्बन्ध पनि उत्तम हुन्छ । मीन राशिका मानीसका लागि वृष, कन्या या मकर राशिका साथी सामान्य हुन्छ । यिनीहरुको प्रेम प्रसंग आपसी तालमेलमा अधिक निर्भर रहन्छ । मिथुन,तुला र कुम्भ राशिका मानिसका साथ मीन राशिको प्रेम सम्बन्ध सफल हुने सम्भावना ५०–५० हुन्छ । मीन राशिका मानिसका लागि मेष, सिंह या धनु राशिका साथी त्यति उत्तम मानिदैन । यिनीहरूको प्रेम सम्बन्धको सफलताको सम्भावना एकदमै कम हुन्छ ।
नयाँ वर्ष बि सं २०७५ सालको बार्षिक राशिफल, यी राशीको लागि निकै राम्रो छ यो वर्ष
यी राशि भएका युवाहरुले पाउँछन् सुन्दरी श्रीमती,कुन हो तपाईको राशि ?
जान्नुहोस् कुन राशिका पुरुषको पत्नी खुसी रहन्छन् : १) कन्या राशिका व्यक्ति ह्याण्डसम देखिन्छन् । जो सुकै केटी यस्ता केटा...
यी चार राशिका मानिसहरुमा हुन्छ अद्भुत क्षमता
ज्योतिषी भाषाअनुसार भन्ने हो भने तपाईहाम्रो जीवन राशिअनुसार चल्छ । तपाईमाथि गृह, नक्षेत्रको के कस्तो प्रभाव परेको छ, यो ...
धेरै भाग्यमानी हुन्छन यी व्यक्ति जस्को शरिरको यी पाँच स्थानमा कोठी हुन्छ
ज्योतिषको आधारमा आज हामी तपाईंलाई शरिरका यस्तो स्थान बताउँदैछौं जहाँ कोठी हुनु निकै राम्रो र शुभ मानिन्छ । १. भाग्यको को...
कस्तो छ २०७४ साल ? यसो भन्छन् ज्योतिषी सिटौला
ज्योतिष पण्डित डा. सुनिल सिटौला द्रिक सिद्धान्त गणित अनुसार काठमाडौंमा मंगलवार बिहान ७ बजेर ४१ मिनेटदेखी बुधबार बिहान ५ ...